အခန်း(၁၆) သောင်းကျန်းသူများ အစုလိုက်အပြုံလိုက် လက်နက်ချခြင်းနှင့် ရှမ်းသောင်းကျန်းသူများ ပေါ်ပေါက်လာခြင်း (၁၉၅၈ ခုနှစ်) - Myanmar Political Research Organization
Home » history-2 » အခန်း(၁၆) သောင်းကျန်းသူများ အစုလိုက်အပြုံလိုက် လက်နက်ချခြင်းနှင့် ရှမ်းသောင်းကျန်းသူများ ပေါ်ပေါက်လာခြင်း (၁၉၅၈ ခုနှစ်)
အခန်း(၁၆) သောင်းကျန်းသူများ အစုလိုက်အပြုံလိုက် လက်နက်ချခြင်းနှင့် ရှမ်းသောင်းကျန်းသူများ ပေါ်ပေါက်လာခြင်း (၁၉၅၈ ခုနှစ်)
သောင်းကျန်းသူများ အစုလိုက်အပြုံလိုက် လက်နက်ချခြင်းနှင့် ရှမ်းသောင်းကျန်းသူများ
ပေါ်ပေါက်လာခြင်း (၁၉၅၈ ခုနှစ်)
ဖဆပလအဖွဲ့ကြီး နှစ်ခြမ်းကွဲခါစ ၁၉၅၈ ခုနှစ်၊ မေလ ၇ ရက်တွင် သန့်ရှင်းခေါင်းဆောင် ဝန်ကြီးချုပ် ဦးနုက မိမိအစိုးရသာ ဆက်လက်တည်မြဲနေလျှင် (၁) အာဃာတမထားရေး၊ (၂) သင်ပုန်းချေရေး၊ (၃) အလုပ် အတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဟူသော ဖဆပလညီလာခံ စကားကြီးသုံးခွန်းကို အကောင်အထည်ဖော်သွားမည် ဟုကတိပေးခဲ့သည်။ ထိုကတိပေးချက်ကို အခွင့်ကောင်း ယူကာ ၁၉၅၈ ခုနှစ်၊ မေလ ၂ဝ ရက်တွင် ဗမာပြည် ကွန်မြူနစ်ပါတီ၏ ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦး* (* ဒေါက်တာမောင်မောင်၏ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးခရီးနှင့် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်း စာအုပ်တွင် ဗိုလ်ရဲထွဋ်ကို စေလွှတ်သည်ဟုဆိုသည်။ သခင်တင်မြ၏ သမိုင်းတစ်ခေတ်သစ်ခဲ့ပြီ စာအုပ်တွင်လည်း ဗိုလ်ရဲထွဋ်ဟုသာ ဖော်ပြသည်။) သည် ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေး အကောင်အထည်ဖော်ရေး အတွက် အစိုးရနှင့်ပဏာမဆွေးနွေးရန် ရောက်ရှိလာခဲ့သည်။ ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီက သန့်ရှင်းအစိုးရ အား ပေးပို့ခဲ့သည့်စာထဲတွင် ဆောင်ရွက်စေလိုသော အချက်များကို အောက်ပါအတိုင်း ဖော်ပြထားသည်-
(၁) (က) နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများအားလုံး လွှတ်ပစ်ရန်။
(ခ) ပြည်တွင်းစစ်ကိုအကြောင်းပြု၍ ပြဋ္ဌာန်းခဲ့သော ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်ရေး ဥပဒေကို ရုပ်သိမ်းပစ်ရန်။
(ဂ) ပြည်တွင်းစစ်ကိုအကြောင်းပြု၍ ဖွဲ့စည်းခဲ့သော ခါးပိုက်ဆောင်တပ်များ ကို တပ်မတော်နှင့်ရဲမှအပ ဖျက်သိမ်း ပစ်ရန်။
(ဃ) ပါတီအဖွဲ့အစည်းအားလုံး တရားဝင် တည်ထောင်ခွင့်၊ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက် ခွင့်ပေးရန်။
(င) ပြည်တွင်းစစ်အတွင်း ကျူးလွန်မှု များကို သင်ပုန်းချေရန်ဟူသော ဒီမို ကရေစီ အာမခံချက်များကို အခိုင် အမာပေးရန်ဖြစ်သည်။
(၂) နှစ်ဦးနှစ်ဖက် တစ်ပြိုင်တည်း ကြေညာ၍ တစ်ပြိုင်တည်း အတိုက်အခိုက်ရပ်စဲရန်ဖြစ် သည်။
(၃) ဦးနုအစိုးရနှင့် တော်လှန်ရေးအင်အားစုများ နှစ်ဖက်ဆွေးနွေးဖို့၊ ပြည်တွင်းစစ်ရပ်စဲရေး၊ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်စပ်လျဉ်းသော ပြဿနာအရပ်ရပ်နှင့်ပတ်သက်၍ သဘော တူညီချက်ရယူရန်ဖြစ်သည်။
ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီသည် ဖော်ပြပါအချက် သုံးချက်ကိုတောင်းဆိုပြီးနောက် သန့်ရှင်းအစိုးရကသာ ယင်းတို့တောင်းဆိုသော အချက်သုံးချက်ကို သဘောတူ ပါက အောက်ပါအချက်များကို လိုက်နာပါမည်ဟု ပေးစာတွင်ဖော်ပြထားသည်။
(က) လက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲစွန့်ကြောင်း၊ အစိုးရနှင့်တစ်ပြိုင်တည်း ကြေညာရန်အသင့်ရှိ ပါသည်။
(ခ) ပြည်တွင်းစစ်ရပ်စဲပြီးနောက် အားလုံးသည် ဥပဒေအတွင်း ဒီမိုကရေစီနည်းအရ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်သွားမည်။
(ဂ) ဥပဒေထဲဝင်ရလျှင် ကျွန်တော်တို့၏ လက်နက်ကိုင်တပ်များနှင့် လက်နက်များ သည် အမျိုးသားကာကွယ်ရေး၊ ပြည်သူ့ လုံခြုံရေးအတွက် တရားဥပဒေအရဖြစ်စေ ရမည်ဟု ကြေညာရန် အသင့်ရှိပါသည်။
ဦးနု၏ သန့်ရှင်းအစိုးရသည် တည်မြဲများ၏အယုံ အကြည်မရှိအဆိုကို ၁၉၅၈ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၉ ရက်တွင် ပွတ်ကာသီကာဖြင့် အနိုင်ရလိုက်သည်။ ထို့နောက် ဦးနု သည် ဇွန်လ ၂၄ ရက်တွင် အမျိုးသားညီလာခံကြီး တစ်ရပ်ကို ခေါ်လိုကြောင်းနှင့် အစိုးရ၏မူ၊ အတိုက်အခံ များ၏မူကို မော်ကွန်းရေးထိုးသတ်မှတ်ရန်လိုကြောင်း၊ တိုင်းပြည်သို့ အသံလွှင့်ကြေညာခဲ့သည်။ တောခိုရဲဘော် များသည်လည်း အလင်းဝင်လာကြပြီး အမျိုးသား ညီလာခံကြီးစတင်ကျင်းပရန် စီစဉ်ချိန်မှစ၍ ပါဝင် သင့်ကြောင်းလည်းပြောကြားခဲ့သည်။ ထို့အပြင် နှစ်ဖက် ကျူးလွန်ချက်အားလုံးကို သင်ပုန်းချေရန် လွတ်ငြိမ်း ချမ်းသာခွင့်ဥပဒေ (ခေါ်) သင်ပုန်းချေဥပဒေကို ပြဋ္ဌာန်းပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း ဥပဒေအတွင်းဝင်လာပြီး သည့်နောက် တောခိုပါတီအား တရားဝင်ပါတီ အဖွဲ့အစည်းများအဖြစ် လွတ်လပ်စွာထူထောင်ခွင့် ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း ကတိပေးခဲ့သည်။
ဦးနု၏ အသံလွှင့်မိန့်ခွန်းတွင် တောခိုအဖွဲ့အစည်း များအား လက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲကိုစွန့်လွှတ်၍ ဖွဲ့စည်း အုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေနှင့်အညီ တရားဝင်အဖွဲ့ အစည်းများအဖြစ် ဝင်ရောက်ဆောင်ရွက်ရန်။ လက်နက်များကို စစ်အာဏာပိုင်များထံအပ်နှံရန် တိုက်တွန်းခဲ့သည်။ အတိုက်အခံ ပမညတများကလည်း အစိုးရကပေးထားသော သင်ပုန်းချေခွင့်နှင့်တရားဝင် အဖွဲ့အစည်းရပ်တည်ခွင့်ဟူသည့် အခွင့်ရေးနှစ်ရပ်ကို လက်မလွှတ်ဘဲ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်နိုင် စေရန် လက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲမှ လူထုတိုက်ပွဲသို့ ပြောင်းလဲပါဟူ၍ ဇွန်လ ၂၈ ရက်တွင် ကြေညာကြ သည်။
ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီသည် တွေ့ဆုံဆွေးနွေး ရေးမူကို အသေဆုပ်ကိုင်ထားလျက်ရှိရာ အစိုးရ၏ ကြေညာချက်နှင့်ပတ်သက်ပြီး အကျပ်ရိုက်လျက်ရှိ သည်။ မိမိတည်ဆောက်ထားသည့် သုံးပါတီ ညီညွတ် ရေးမှာလည်း များစွာဖရိုဖရဲဖြစ်နေလေပြီ။ ဗမာပြည် ကွန်မြူနစ်ပါတီသည် ဦးနု၏ကြေညာချက်ကို လက်နက် ချ အညံ့ခံရေးမူအဖြစ်သာ မြင်နေလေသည်။
ထိုအချိန်တွင် တစ်ချိန်လုံးပြတ်သားသော ဆုံးဖြတ် ချက်များကို မချမှတ်နိုင်ခဲ့ကြသော ပြည်သူ့ရဲဘော် (ရဲဘော်ဖြူ)များသည် ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီအပေါ် များစွာစိတ်ကုန်လျက်ရှိနေလေပြီ။ ပြည်သူ့ရဲဘော် များသည် အလံဖြူ ကွန်မြူနစ်ပါတီများနှင့် အလံနီ ကွန်မြူနစ်ပါတီတို့၏အယူအဆရေးရာ တိုက်ပွဲများကြားတွင် ညပ်မိသကဲ့ သို့ဖြစ်ပြီး မိမိအခန်းကဏ္ဍမှာ လည်းများစွာမှေးမှိန်ခဲ့ရပြီဖြစ်သည်။ ၁၉၅၈ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၃၁ ရက်တွင် နိုင်ငံတော်သမ္မတ ပြည်တွင်း ငြိမ်းချမ်းရေးရရှိရေးအတွက် သင်ပုန်းချေခွင့်နှင့် ပါတီ များတရားဝင်ခွင့်အမိန့်ကို ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။
ပြည်သူ့ရဲဘော်များသည် ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ် ပါတီနှင့် အလံနီကွန်မြူနစ်ပါတီကို ကျောခိုင်းလိုက် ကြသည်။ နီးစပ်ရာတပ်စခန်းများတွင် လက်နက်ချ အလင်းဝင်လိုက်ကြသည်။ ပြည်သူ့ရဲဘော်များအနေနှင့် ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီ၏ နှောင့်ယှက်ပိတ်ဆို့မှုကို များစွာကြုံခဲ့ရသည်။ သို့နှင့် ၁၉၄၈ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၉ ရက်မှစ၍ ဆယ်နှစ်ကြာ တောခိုသောင်းကျန်းခဲ့ သော ပြည်သူ့ရဲဘော်များသည် အလင်းဝင်ပြီးနောက် ၁၉၅၈ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၁၅ ရက်တွင် ပြည်သူ့ ရဲဘော်အဖွဲ့ဌာနချုပ်ကို တရားဝင်ဖွင့်လှစ်ကြေညာ လိုက်ကြတော့သည်။ ထို့နောက် ပြည်သူ့ရဲဘော်များ သည် ပမညတတွင် တပ်ပေါင်းစုပါတီအဖြစ် ပါဝင် ကြသည်။ ၁၉၆၂ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလတွင် ဗမာပြည် အလုပ်သမားပါတီနှင့်ပူးပေါင်းကာ ဗမာပြည် အလုပ်သမား ညီညွတ်ရေးပါတီဟု ဖွဲ့စည်းခဲ့ကြသည်။ ၁၉၆၄ ခုနှစ်၊ မတ်လတွင်ကား တော်လှန်ရေးကောင်စီ ၏ အမျိုးသားညီညွတ်ရေး ထိန်းသိမ်းမှုဥပဒေအရ ဖျက်သိမ်း ခံခဲ့ရလေသည်။
နိုင်ငံရေးနိုးကြားမှုမရှိသော မွန်အမျိုးသားများ သည် အသင်းအဖွဲ့များဖွဲ့စည်း၍ မွန်ပြည်နယ်ဖော်ထုတ် ရေးကို လွတ်လပ်ရေးမရခင်ကပင် ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြ သည်။ ဥပဒေအတွင်းတွင်ရှိနေခဲ့ကြသော မွန် အမျိုးသားအသင်းကိုးသင်းမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်သည်-
* (၂) မွန်တိုင်းရင်းသားအစည်းအရုံး။(*ကေအင်န်ဒီအိုများ၏စည်းရုံးမှုဖြင့်တောခိုကြသောအဖွဲ့များဖြစ် သည်။)
* (၈) မွန်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့။ (*ကေအင်န်ဒီအိုများ၏စည်းရုံးမှုဖြင့် တောခိုကြသောအဖွဲ့များဖြစ်သည်။)
မွန်အသင်းများ၏ အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာ မွန်ပြည်နယ်ရရှိရေးပင်ဖြစ်သည်။ ကရင်များကလည်း ကရင်ပြည်နယ်ရရှိရေး ကိုဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ နယ်မြေချင်းဆက်စပ်နေသဖြင့် အပြန်အလှန် အထောက်အကူပြုကြရန် မွန်နှင့်ကရင်အဖွဲ့များ သဘောတူထားခဲ့ကြသည်။ ၁၉၄၈ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ တွင် ကေအင်န်ဒီအိုများ သထုံခရိုင်တွင် စတင် သောင်းကျန်းကြသောအခါ မွန်တိုင်းရင်းသား အစည်းအရုံးနှင့် လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့တို့သည် ကေအင်န် ဒီအိုများ၏စည်းရုံးမှုဖြင့်တောခိုခဲ့ကြသည်။ မွန် တိုင်းရင်းသားအစည်းအရုံးကို နိုင်အောင်ထွန်း၊ နိုင်ချမ်းမွန်၊ နိုင်ဆိတ်နို့တို့ကခေါင်းဆောင်ပြီး မွန် လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ကို နိုင်ငွေသိန်း၊ နိုင်သိန်းမောင် တို့ကခေါင်းဆောင်သည်။ မွန်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့သည် ကေအင်န်ဒီအိုများနှင့်ပူးပေါင်း၍ သထုံနှင့်မော်လမြိုင် ခရိုင်များကို အလစ်တွင်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ကြသည်။
တပ်မတော်က သထုံ၊ မော်လမြိုင်ဒေသတွင် စစ်ဆင်ရေးများဖြင့် ထိုးစစ်ဆင်သောအခါ မွန် သောင်းကျန်းသူများသည် ကေအင်န်ဒီအိုများနှင့်အတူ ကော့ကရိတ်ဘက်သို့ ဆုတ်ခွာသွားကြသည်။ ထို့နောက် မြဝတီနယ်ထဲတွင် ကေအင်န်ဒီအိုများနှင့်ပူးပေါင်းကာ အခြေချနေထိုင်ကြတော့သည်။ တောခိုသော မွန်အဖွဲ့ နှစ်ဖွဲ့မှာ တစ်ဖွဲ့နှင့်တစ်ဖွဲ့မတည့်ကြဘဲ မကြာခဏ ပဋိပက္ခများပေါ်ပေါက်လျက်ရှိသည်။ တပ်မတော်က တိုက်ခိုက်လျှင် အတိုက်ခံရသောအဖွဲ့က အကူအညီ တောင်းသော်လည်း ကျန်အဖွဲ့ကအကူအညီပေးလေ့ မရှိပေ။ တပ်မတော်က မြဝတီနယ်ကို စစ်ဆင်ရေး လုပ်သောအခါ မွန်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့သည် မွန် တိုင်းရင်းသားအစည်းအရုံးဝင်များ သိမ်းပိုက်ထား သည့် ကျိုက်မရော၊ ကြာအင်း၊ တောင်ပေါက်ဒေသများ သို့ ဝင်ရောက်လာခဲ့ကြရသည်။
ထို့နောက် မွန်အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့သည် ခေါင်းဆောင်ချင်း စေ့စပ်ကာ ၁၉၅၂ ခုနှစ်တွင် ပူးပေါင်းလိုက်ကြသည်။ ထို့နောက် မွန်ပြည်သူ့တပ်ပေါင်းစုအမည်ဖြင့် နယ်မြေ လူထုအတွင်း စည်းရုံးရေးလုပ်ငန်းများလုပ်လာကြသည်။ မွန်သောင်းကျန်းသူများသည် ပအိုဝ့်၊ ကရင်နီများ နည်းတူ ကေအင်န်ယူခေါင်းဆောင်သည့် ကော်သူးလေ အဖွဲ့တွင်ပါဝင်ကြသော်လည်း ကေအင်န်ယူများ၏ လက်ဝါးကြီးအုပ်မှုကိုခံကြရသည်။ ကေအင်န်ယူသည် မွန်ပြည်သူ့တပ်ပေါင်းစုကို သီးခြားအဖွဲ့အစည်း အနေအထားထက် ယင်းတို့၏လက်အောက်ခံ လက်နက်ကိုင်တပ်အဖြစ်သာအသုံးချခဲ့ကြသည်။ မွန် တပ်ပေါင်းစုတပ်သားများမှာ ကော်သူးလေတပ်များတွင် ရောနှော၍ပါဝင်ခဲ့ကြရသည်။ ထို့နောက် မွန်တပ် ပေါင်းစုမှာ မှေးမှိန်လျက်ရှိပြီး ကေအင်န်ယူများသာ သြဇာအာဏာကြီးမားနေခဲ့သည်။
ကေအင်န်ယူနှင့် တရုတ်ဖြူကျူးကျော်ရေးသမား များ ပူးပေါင်းကြသောအခါတွင်လည်း မွန်တပ်ပေါင်းစု သည် ကေအင်န်ယူများအလိုကျ တရုတ်ဖြူများနှင့် ပေါင်းခဲ့ကြရသည်။ ၁၉၅၂ ခုနှစ်တွင် တရုတ်ဖြူတပ်ရင်း တစ်ရင်းသည် မွန်တို့ဒေသဖြစ်သော ကရွတ်ပိ၊ ပင ဒေသသို့ ရောက်ရှိတပ်စွဲခဲ့သည်။ တရုတ်ဖြူများသည် ပင်လယ်ဆိပ်ကမ်းကိုအလိုရှိသဖြင့် ကေအင်န်ဒီအိုများ ၏အကူအညီဖြင့် မွန်ဒေသအထိ ထိုးဖောက်လာခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ သို့သော် မွန်သောင်းကျန်းသူများအတွင်း တွင် တရုတ်ဖြူကိုလိုလားသောအုပ်စုနှင့်မလိုလားသော အုပ်စုဟူ၍ အုပ်စုကွဲကာ ပဋိပက္ခများပေါ်ပေါက်လာ သည်။ ၁၉၅၃ ခုနှစ် တပ်မတော်က တိုက်ခိုက်လာသော အခါ တရုတ်ဖြူများသည် ရှေ့တန်းမှတိုက်ခိုက်ခြင်းမပြု ဘဲ မွန်များကိုသာ အသေခံခိုင်းခဲ့ရာ မွန်သောင်းကျန်းသူ များသည် ကေအမ်န်တီတရုတ်ဖြူများကိုအယုံအကြည် ကင်းမဲ့လာကြသည်။ ယင်းတို့ နယ်မြေဆုံးရှုံးရခြင်းမှာ တရုတ်ဖြူများကြောင့်ဟုလည်း မြင်လာကြသည်။
ထို့နောက် မွန်ပြည်သူ့တပ်ပေါင်းစုအတွင်း ပိုမို စိတ်ဝမ်းကွဲပြားလာကြကာ ပဋိပက္ခများပြင်းထန်လာ သည်။ နယ်မြေလုမှု၊ နယ်မြေခွဲ၍ ပြန်ပေးဆွဲဓားပြ တိုက်မှုများပေါ်ပေါက်လာသောအခါ ခေါင်းဆောင် အချင်းချင်း အငြင်းပွားလာသည်။ ခေါင်းဆောင်များ သည် ငယ်သားများကို မထိန်းသိမ်းနိုင်တော့ပေ။ ထို့ကြောင့် မွန်ပြည်သူ့တပ်ပေါင်းစုသည် နိုင်ငံရေး၊ စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုများ ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းမရှိဘဲ ကေအင်န်ဒီအိုများ နောက်လိုက်သောင်းကျန်းသူ အဖွဲ့ဝင်အဆင့်လောက်သာရရှိခဲ့ကြသည်။ သို့သော် ခေါင်းဆောင်ပိုင်းသည် ၁၉၅၄ ခုနှစ်တွင် မွန်ပြည်သူ့ တပ်ပေါင်းစုကို မွန်ပြည်သူ့တပ်ဦးအဖြစ် ပြန်လည် ဖွဲ့စည်းပြီး နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုများ ပြင်းထန်လာအောင် လှုံ့ဆော်ကြိုးပမ်းခဲ့ကြသည်။
သို့သော် မွန်ပြည်သူ့တပ်ဦးသည်လည်း အဖွဲ့တွင်း ပဋိပက္ခများပြင်းထန်လာပြီး အုပ်စုဖွဲ့မှုများပေါ်ပေါက် လာသည်။ ဗဟိုဌာနချုပ်သည် ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီ နှင့်ဆက်သွယ်ပူးပေါင်းကာ သုံးပါတီနှင့်သဘောတူညီ ချက်အချို့ကိုရယူခဲ့သည်။ အခြားမွန်ခေါင်းဆောင် အချို့မှာမူ ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီနှင့် ပူးပေါင်း ခြင်းကိုမကျေနပ်ကြပေ။ သဘောကွဲလွဲမှုများ ပိုမို များပြားလာပြီး အချို့က သုံးပါတီနှင့်သဘောတူညီချက် ချမှတ်ထားသည်များကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်ပေးရန် တောင်းဆိုလာကြသည်။
မွန်ပြည်သူ့တပ်ဦးအဖွဲ့အတွင်း ပဋိပက္ခကြီးမား လာခြင်း၊ ကေအင်န်ဒီအိုများက အနိုင်ကျင့်ခြင်း၊ ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီကလည်း လက်ဝါးကြီးအုပ်ရန် ကြိုးစားလာခြင်းတို့အပြင် တပ်မတော်ထိုးစစ်များ ကြောင့် ခေါင်းဆောင်နှင့်ငယ်သားများမှာ တဖြည်းဖြည်း စိတ်ဓာတ်ကျဆင်းလာကြသည်။ သို့နှင့် ၁၉၅၈ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၄ ရက်တွင် မော်လမြိုင်မြို့ရှိ တပ်မတော် စခန်းသို့ နိုင်ချမ်းမွန်နှင့် နိုင်ဆိတ်နို့တို့ခေါင်းဆောင် သော မွန်သောင်းကျန်းသူ ၁၁၁၁ ယောက်သည် လက်နက်မျိုးစုံ ၃၅၅ လက်၊ ကျည်မျိုးစုံ ခုနစ်ထောင် ခန့်ဖြင့် လက်နက်ချအလင်းဝင်လာကြတော့သည်။
၁၉၅၈ ခုနှစ်၊ မေလ ၇ ရက်တွင် သန့်ရှင်းအစိုးရ ဝန်ကြီးချုပ်ဦးနုက သောင်းကျန်းသူများအပေါ်တွင် သင်ပုန်းချေအာဃာတမထားရေး မိန့်ခွန်းကိုပြောကြား ခဲ့သည်မှစ၍ ရဲဘော်ဖြူနှင့်မွန်သောင်းကျန်းသူများ လက်နက်ချသည့်အခြေအထိ ဖြစ်စဉ်ကိုတင်ပြပြီး လေပြီ။ ထိုအချိန်တွင် ရှမ်းပြည်နယ်တွင် သထုံလှဖေ နှင့်ဗိုလ်ချမ်းဇုံတို့ ထြ<ွကသောင်းကျန်းနေကြချိန်ပင်ဖြစ် သည်။ ပအိုဝ့်လှိုင်ဗူအဖွဲ့က ပဒေသရာဇ်ဆန့်ကျင်ရေး လှုပ်ရှားမှုများ စတင်လုပ်ဆောင်ရာမှ ကေအင်န်ဒီအို သထုံလှဖေ၏ခေါင်းဆောင်မှုဖြင့် ပအိုဝ့်သောင်းကျန်းမှု စတင်ခဲ့ရသည်။ ၁၉၅ဝ ပြည့်နှစ်တွင် စစ်ဆင်ရေး ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချမ်းဇုံ လက်နက်ချခဲ့သော်လည်း ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရ၏ဖိနှိပ်မှုကြောင့် တောထဲသို့ ပြန်ရောက်သွားခဲ့ရသည်။
ထို့နောက်ပိုင်းတွင် သထုံလှဖေသည် ကွန်မြူနစ် များနှင့်ပူးပေါင်းကာ ပအိုဝ့်တိုင်းရင်းသားများအား သိမ်းသွင်းခဲ့သေးသည်။ သို့သော် ၁၉၅၈ ခုနှစ်၊ မေလ ၅ ရက်တွင် သထုံလှဖေနှင့် ဗိုလ်ချမ်းဇုံတို့ ဦးဆောင် သော ပအိုဝ့်တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် ၁၂ဝဝ ကျော် သည် တောင်ကြီးမြို့တွင် လက်နက်ချ၍ အလင်းဝင် လာခဲ့ကြတော့သည်။
ပြည်သူ့ရဲဘော်အဖွဲ့ချုပ်နှင့် မွန်ပြည်သူ့တပ်ဦးတို့ ဥပဒေဘောင်အတွင်းသို့ ဝင်ရောက်သွားကြသော်လည်း ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီမှာမူ အစိုးရနှင့်ပြေလည်မှု မရနိုင်သေးပေ။ ၁၉၅၈ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၁၅ ရက်တွင် အလင်းဝင်လာကြသော ပြည်သူ့ရဲဘော်များက တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးရေးမူအရသာ အစိုးရကဖိတ်ခေါ်ပါက တောတွင်း၌ကျန်ရှိနေသော အဖွဲ့အစည်းများ ဝင်လာ ကြလိမ့်မည်ဟု သြဂုတ်လ ၂၄ ရက်တွင် ကြေညာသည်။ သို့သော် သန့်ရှင်းအစိုးရက လက်နက်ချရေးကိုသာ ကိုင်စွဲထားပြီး ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီကလည်း တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးမူကို လက်မလွှတ်နိုင်ပေ။ ဗမာပြည် ကွန်မြူနစ်ပါတီသည် သြဂုတ်လ ၂၉ ရက်တွင် ဗမာပြည် အလုပ်သမားပါတီသို့ စာတစ်စောင်ပေးပို့ခဲ့ရာ လက်နက်ချအညံ့ခံနည်းနှင့် နှစ်ဖက်စေ့စပ် ဆွေးနွေး နည်းဟူသော စစ်ရပ်စဲရေးနှစ်နည်းအနက် နှစ်ဖက် စေ့စပ်ဆွေးနွေးနည်းကိုသာလက်ခံနိုင်မည်ဟု ရေးသား ခဲ့သည်။ ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီက ဗမာပြည် အလုပ်သမားပါတီသို့ ပေးစာကို သတင်းစာများတွင် ဖော်ပြခဲ့သည်။
ထို့နောက် ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီသည် ပါတီ အောက်ခြေနှင့်ဗဟိုကော်မတီများ၏ တင်ပြချက်ကြောင့် အစိုးရနှင့် တိုက်ရိုက်ဆွေးနွေးရေးမူအစား ပြည်တွင်း ငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့မှတစ်ဆင့် ဆွေးနွေးရေးမူသို့ ပြောင်းလဲလိုက်သည်။ ပမညတများထံပေးစာကို သတင်းစာများက သြဂုတ်လ ၃ဝ ရက်တွင် ဖော်ပြ ကြရာ ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီက ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်း ရေးအဖွဲ့နှင့် တောတွင်းကိုယ်စားလှယ်များ ရန်ကုန်တွင် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးလိုကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။ ယင်း အချက်ကို အလံနီနှင့်ကော်သူးလေအဖွဲ့ကလည်း သဘောတူသည်ဟုဆိုသည်။ သို့သော် ဗမာပြည် ကွန်မြူနစ်ပါတီနှင့်သန့်ရှင်းအစိုးရတို့သည် တစ်ဖက်နှင့် တစ်ဖက် အကျပ်ကိုင်ဈေးဆစ်နေကြသဖြင့် ပြည်တွင်း ငြိမ်းချမ်းရေးမှာ အောင်မြင်မှုမရှိခဲ့ပေ။
ထိုအချိန်တွင် ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီ၏ ဗဟို ချုပ်ကိုင်မှုကို လက်မခံဘဲရှိနေသော တိုင်း(၃)အုပ်စု သည် ကွန်မြူနစ်ပါတီနှင့်သန့်ရှင်းအစိုးရတို့ တစ်ဖက် နှင့်တစ်ဖက် အကျပ်ကိုင်ဈေးဆစ်နေကြခြင်းကို မလိုလားနိုင်တော့ပေ။ ထို့ကြောင့် တိုင်း(၃)အုပ်စုသည် အိမ်စောင့်အစိုးရတက်ခါစမှာပင် လက်နက်ချ အလင်းဝင်လာတော့သည်။
လက်နက်ချခေါင်းဆောင်များမှာ အောက်ပါ အတိုင်းဖြစ်သည်-* (* ၂၈-၃-၅၉ ထုတ် အောက်ဗမာပြည် တိုင်းရဲဘော်များ၏ တင်ပြချက်၊ ကွန်မြူနစ်ပါတီအတွက်လမ်းညွှန်။)
၁။ ဗိုလ်ညွန့်မောင်၊ ဗဟိုကော်မတီနှင့် တိုင်းပါတီ အတွင်းရေးမှူး။
၂။ သခင်စောရင်၊ တိုင်းပါတီကော်မတီနှင့် တောင်သူ လယ်သမားသမဂ္ဂ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်။
၃။ ဗိုလ်လှမိုး၊ တိုင်းပါတီကော်မတီနှင့်တိုင်းစစ် ကော်မတီ။
၄။ ဗိုလ်ထွန်းမြင့်၊ တိုင်းစစ်ကော်မတီ။
၅။ ဗိုလ်ကျော်ဒွန်း၊ ပဲခူးခရိုင်လှည့်လည်တပ်မှူး။
၆။ ဗိုလ်တင်ဝင်း၊ မော်လမြိုင်ခရိုင်ပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ။
၇။ ဗိုလ်ညို၊ ခရိုင်ကော်မတီ၊ မော်လမြိုင်ခရိုင်။
၈။ ရဲဘော်အောင်ရွှေ၊ ခရိုင်ကော်မတီ၊ သထုံခရိုင်။
၉။ ရဲဘော်စိန်မြင့်၊ ခရိုင်ကော်မတီ၊ သထုံခရိုင်။
၁ဝ။ ဗိုလ်ညိုမင်း၊ ခရိုင်ကော်မတီ၊ ပဲခူးခရိုင်။
လက်နက်ချအလင်းဝင်ရောက်လာကြသောဗမာပြည် ကွန်မြူနစ်ပါတီ တိုင်း(၃)အုပ်စုမှ ရဲဘော်များသည် ၁၉၅၉ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၂၈ ရက်တွင် ပြည်တွင်းစစ် ၁၁ နှစ်မြောက်နေ့အထိမ်းအမှတ်၊ ကွန်မြူနစ်ပါတီအတွက် လမ်းညွှန်၊ မကြာမီက လက်နက်စွန့်ခဲ့သော အောက် ဗမာပြည်တိုင်း ရဲဘော်များ၏တင်ပြချက်အမည်ရှိ စစ်တမ်းတစ်စောင် ကိုထုတ်ဝေ၍ လက်နက်ကိုင် သောင်းကျန်းသူများ လက်နက်ကိုင်လမ်းစဉ်ကို စွန့်လွှတ်ကြရန် နှိုးဆော်ခဲ့ကြသည်။
ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီမှ အောက်ဗမာပြည် တိုင်း၊ သို့မဟုတ်၊ တိုင်း(၃)အုပ်စု လက်နက်ချသွားခြင်း သည် ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီ၏ နိုင်ငံရေးသြဇာခံ ဖြစ်နေသော ကေအင်န်ယူပါတီကိုလည်း များစွာထိခိုက် စေခဲ့သည်။ လက်နက်ကိုင်သောင်းကျန်းမှုကို စက်ဆုပ်ငြီးငွေ့လာသဖြင့် ကေအင်န်ယူပါတီဝင်များလည်း လက်နက်ချ အလင်းဝင်လာခဲ့ကြရာ လက်နက်ချသူ များကို အောက်ပါပုဂ္ဂိုလ်များက ခေါင်းဆောင်သည်။
၁။ စောမောင်တိုး၊ ကေအင်န်ယူပါတီ၊ ပေါ်လစ်ဗျူရို ဝင်။
၂။ ဆရာဘာဟု၊ ကေအင်န်ယူပါတီ ဗဟိုကော်မတီ ဝင်နှင့် ပဲခူးရိုးမတိုင်း သဘာပတိ။
၃။ စောကျော်စိန်၊ ကေအင်န်ယူပါတီ၊ ဦးစီးပဲ့ကိုင် ကော်မတီ။
လက်နက်ချအလင်းဝင်လာသော ကေအင်န်ယူ ရဲဘော်များသည် အခြားအလင်းရောက် ရဲဘော်များနှင့် ညှိနှိုင်း၍ ၁၉၅၉ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၂ဝ ရက် နေ့စွဲဖြင့် ကော်သူးလေ တော်လှန်ရေးစစ်တမ်းကို ရေးသားထုတ်ဝေခဲ့ကြသည်။ ကော်သူးလေတော်လှန် ရေးစစ်တမ်းသည် ကေအင်န်ယူတို့၏လမ်းစဉ်များ မှားယွင်းခဲ့ပုံ၊ ဆူပူသောင်းကျန်းမှုကြောင့် ပြည်သူ လူထုနစ်နာပုံတို့ကိုဖော်ပြ၍ လက်နက်ချအလင်းဝင် ကြရန် တိုက်တွန်းထားခြင်းဖြစ်လေသည်။
ရခိုင်သောင်းကျန်းသူများလက်နက်ချခြင်း၁ (၁။ရခိုင်ပြည်နယ် ပြည်သူ့ကောင်စီ၏ ပြည်နယ်ဖြစ်စဉ်သမိုင်း ဒုတိယတွဲ (နိုင်ငံရေးကဏ္ဍ)။)
ရခိုင်တိုင်းအတွင်းရှိ တောတွင်းအဖွဲ့အစည်းများ သည် တစ်သီးပုဂ္ဂလအမတ်များ၏ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်း ရေးအဖွဲ့နှင့်ဆက်သွယ်၍ ၁၉၅၈ ခုနှစ်၊ နှစ်ဦးပိုင်းတွင် လက်နက်စွန့်ခဲ့ကြသည်။ ဦးစိန္တာ၊ ဦးစံဖော်ဦး(ခေါ်) ဦးအောင်မြင့်နှင့် ဦးအောင်သာလှ(ကျားတောင်း)တို့ ခေါင်းဆောင်သော ပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ချုပ် (ပီအယ်လ်ပီ)သည် ၁၉၅၈ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၅ ရက် တွင် မင်းပြားမြို့၌ လက်နက်စွန့်ပွဲကျင်းပကြသည်။ ကွန်မြူနစ်ပါတီ ရခိုင်တပ်မှ ဗိုလ်အောင်ကျော် (ဗိုလ်စောဦး)နှင့် ဦးသာထွန်းအောင်တို့ ခေါင်းဆောင် သောအဖွဲ့၊ ပြည်သူ့ရဲဘော်မှ ဗိုလ်စံသာကျော်နှင့် ဦးစံအောင်တို့ ခေါင်းဆောင်သောအဖွဲ့တို့သည် ဖေဖော်ဝါရီလ ၂ဝ ရက်တွင် အမ်းမြို့၌ လက်နက် စွန့်လွှတ်ခဲ့ကြသည်။ ပြည်သူ့ရဲဘော်မှ ဦးကျော်ထွန်းနှင့် ဦးသာကျော်အောင် ခေါင်းဆောင်သောအဖွဲ့က ကျောက်တော်မြို့တွင် ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၈ ရက်တွင် လက်နက်ချခဲ့ကြသည်။ ပြည်သူ့ရဲဘော်မှ ဦးဘခင် ခေါင်းဆောင်သောအဖွဲ့က ရမ်းဗြဲတွင်လည်းကောင်း၊ ဦးဘတင်ခေါင်းဆောင် သောအဖွဲ့က တောင်ကုတ်တွင် လည်းကောင်း လက်နက်ချခဲ့ကြသည်။
ဦးစိန္တာအဖွဲ့မှ ဦးစိန္တာ၏တပည့်ရင်းဖြစ်သူ ဦးကျော်ဇံရွှီးမှာမူ နောက်လိုက် ၃ဝ ခန့်နှင့်အတူ အလံနီပါတီသို့ ကူးပြောင်းသွားခဲ့ကြသည်။ မင်းပြားမြို့ လက်နက်စွန့်ပွဲသို့ ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ် သခင်တင်၊ ဗိုလ်မှူးကြီးမင်းသိန်း၊ ဗိုလ်မှူးကြီးအောင်ကြီး၊ ဗိုလ်မှူးကြီးဗလိပ်၊ ဗိုလ်မှူးကြီးသန်းဖေ(ရေ)တို့ တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။ သို့နှင့်ရခိုင်ဒေသတစ်ခုလုံးရှိ အမ်းမြို့နှင့်ဂွမြို့အပါအဝင် မြို့အားလုံးမှာ ပြည်တွင်း သောင်းကျန်းသူများ၏လက်မှ လွတ်မြောက်သွားခဲ့ သည်။ သို့ရာတွင် အလံနီနှင့်နစ်ဖြူများမှာမူ ရခိုင်ရိုးမ ကိုခို၍ သောင်းကျန်းနေကြဆဲပင်ဖြစ်ပါ၏။
ဖော်ပြပါဇယားအရ ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီ စတင်တောခိုချိန်တွင် အင်အားမှာ ၃ဝဝဝ ခန့်သာရှိခဲ့ သော်လည်း ကေအင်န်ဒီအိုနှင့် အခြားရောင်စုံ သောင်းကျန်းသူများ စတင်သောင်းကျန်းသည်ကို အခွင့်ကောင်းယူပြီး ၁၉၄၉-၅ဝ ပြည့်နှစ်တွင် အင်အား ၁ဝဝဝဝ ထိ တိုးချဲ့နိုင်ခဲ့သည်ကိုတွေ့ရသည်။ တောခို တပ်များမှာ ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီနှင့် ပူးပေါင်း ကြသဖြင့် ၁၉၅၁-၅၂ ခုနှစ်တွင် အင်အား ၁၂ဝဝဝ အထိ တိုးတက်ခဲ့ရာ အများဆုံးကာလပင်ဖြစ်သည်။ သို့သော် တပ်မတော်၏ထိုးစစ်များနှင့်ပါတီ၏နိုင်ငံရေး ကျဆုံးမှုများကြောင့် ၁၉၅၅-၅၆ ခုနှစ်တွင် အင်အား ၇ဝဝဝ အထိ ကျဆင်းသွားရာမှ ၁၉၅၈ ခုနှစ်တွင် အင်အား ၂ဝဝဝ သာရှိတော့သည်။ ကေအင်န်ဒီအို များသည် ၁၉၄၉ ခုနှစ်တွင် အင်အား ၁ဝဝဝဝ အထိ များပြားခဲ့သော်လည်း ၁၉၅၈ ခုနှစ်တွင် အင်အား ၅ဝဝဝ အထိလျော့ကျသွားခဲ့သည်။ ရောင်စုံ သောင်းကျန်းသူ စုစုပေါင်းအင်အားသည် ၁၉၄၉-၅ဝ ပြည့်နှစ်တွင်အများဆုံးဖြစ်ရာ စုစုပေါင်း ၄၅၅ဝဝ ခန့်ရှိခဲ့သည်။ ထိုအချိန်တွင် တပ်မတော်၏တိုက်ခိုက် ရေးအင်အားမှာ ၁ဝဝဝဝ ခန့်သာရှိသည်။ ၁၉၅၈ ခုနှစ် တွင်ကား တပ်မတော်အတွင်းသို့ မျိုးချစ်စိတ်ရှိသော လူငယ်လူရွယ်အမြောက်အမြား တဖွဲဖွဲရောက်ရှိလာကြ သောကြောင့် တပ်မတော်၏အင်အားမှာ ၁၂ဝဝဝဝ အထိ ရှိလာခဲ့ပေပြီ။
ပြည်တွင်းသောင်းကျန်းသူများ၏ အင်အားအခြေအနေ၁ (၁။ ၂၈-၃-၅၉ ရက်ထုတ် ပြည်တွင်းစစ် ၁၁ နှစ်မြောက်နေ့ အထိမ်းအမှတ် ကွန်မြူနစ်ပါတီအတွက် လမ်းညွှန် (အောက်ဗမာပြည် တိုင်းရဲဘော်များ၏ တင်ပြချက်) )
ပါတီများ ၁၉၄၈ ၁၉၄၈ ၁၉၄၉-၅ဝ ၁၉၅၁-၅၂ ၁၉၅၅-၅၆ ၁၉၅၈
ကွန်မြူနစ် ၃ဝဝဝ ၅ဝဝဝ ၁ဝဝဝဝ ၁၂ဝဝဝ ၇ဝဝဝ ၂ဝဝဝ
တောခိုတပ် - ၃ဝဝဝ ၅ဝဝဝ - - -
ရဲဘော်ဖြူ - ၅ဝဝဝ ၁၅ဝဝဝ ၈ဝဝဝ ၃ဝဝဝ -
အလံနီ - ၁ဝဝဝ ၁၅ဝဝ ၁ဝဝဝ ၅ဝဝ ၃ဝဝ
ကော်သူးလေ - - ၁ဝဝဝဝ ၁ဝဝဝဝ ၇၅ဝဝ ၅ဝဝဝ
မူဂျာဟစ် - ၁ဝဝဝ ၁၅ဝဝ ၁ဝဝဝ ၂ဝဝ ၁၅ဝ
မွန် - - ၁၅ဝဝ ၈ဝဝ ၄ဝဝ ၅ဝ
ပအိုဝ့် - - ၁ဝဝဝ ၇ဝဝ ၄ဝဝ -
စုစုပေါင်း ၃ဝဝဝ ၁၅ဝဝဝ ၄၅၅ဝဝ ၃၃၅ဝဝ ၁၉ဝဝဝ ၇၅ဝဝ
ရှမ်းသောင်းကျန်းမှုအစ* (*ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ စာရွက်စာတမ်းများမှ ထုတ်နုတ်ရေးသားသည်။)
၁၉၄၈ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၂၈ ရက်တွင် ဗမာပြည် ကွန်မြူနစ်ပါတီတောခိုပြီးနောက် ရဲဘော်ဖြူ ကေအင်န် ဒီအို၊ ပအိုဝ့်၊ မွန်နှင့် မူဂျာဟစ် စသော သောင်းကျန်းသူ များမှာ မြန်မာပြည်အနှံ့အပြားတွင် ဆက်တိုက် ပေါ်ပေါက်ခဲ့ကြသည်။ ကေအင်န်ဒီအိုများ လက်နက် ကိုင်တပ်ဖွဲ့များစွာရှိသည့်အလျောက် တပ်စွဲထားရာ နေရာများကို အလွယ်တကူ သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ကြသည်။ ရှမ်းစော်ဘွားအချို့သည် ကရင်သောင်းကျန်းသူများ ကဲ့သို့ပင် သီးခြားပြည်နယ်ထူထောင်ရေးကို အားကျကာ မျှော်လင့်ချက်ထားလာကြသည်။ ကေအင်န်ဒီအိုများ တောင်ကြီးမြို့ကိုမသိမ်းပိုက်မီမှာပင် ရှမ်းစော်ဘွားအချို့ သည် ကေအင်န်ဒီအိုများနှင့် နားလည်မှုယူခဲ့ကြသည်။
ရှမ်းစော်ဘွားအချို့သည် တိုင်းရင်းသားစည်းလုံး ညီညွတ်ရေး၊ နိုင်ငံတော်တည်တံ့ရေး စသည့်တိုးတက် သော အမြင်ရှိသူများကို အကျဉ်းချထားခဲ့ကြသည်။ တစ်ဖက်တွင် ကေအင်န်ဒီအိုများနှင့် နားလည်မှုရရှိ ထားသဖြင့် တောင်ကြီးမြို့၌ စော်ဘွားအစည်းအဝေး ကျင်းပနေစဉ် ကေအင်န်ဒီအိုများက တောင်ကြီး ငွေတိုက်ကို ဖောက်ယူခဲ့သည်။ ကျိုင်းတုံတွင်ရှိနေသော ကေအင်န်ဒီအိုသြဇာခံ ယူအမ်ပီတပ်များက လွိုင်လင် ကိုတိုက်ခိုက်ကာ လွိုင်လင်ငွေတိုက်ကို ဖောက်ယူခဲ့ကြ သည်။ ပဒေသရာဇ်အချို့သည် ကေအင်န်ဒီအို အယောင်ဆောင်ကာ အချုပ်ခန်းအတွင်းမှ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသမားခေါင်းဆောင်များကို သတ်ဖြတ်ခဲ့ ကြသည်။
ကေအင်န်ဒီအိုများသည် ရှမ်းစော်ဘွားအချို့၏ အကူအညီဖြင့် တောင်ကြီးမြို့ကို လေးလကြာသိမ်းပိုက် ထားနိုင်ခဲ့သည်။ ကေအင်န်ဒီအို နော်ဆိုင်း(ကချင် စစ်ဗိုလ်)၏အဖွဲ့ ကယားပြည်နယ်လွိုင်ကော်မှ သိန္နီ၊ နမ့်ခမ်းနယ်အထိ လွတ်လပ်စွာလှုပ်ရှားသွားလာနိုင် ရန် ရှမ်းပဒေသရာဇ်များက ကူညီခဲ့ကြသည်။ ပအိုဝ့် များ၏ ပဒေသရာဇ်စနစ် တော်လှန်ရေးပေါ်ပေါက် လာရာ ရှမ်းပဒေသရာဇ်တို့၏စည်းစိမ်ဥစ္စာများ ပျက်စီး ဆုံးရှုံးခဲ့ကြရသည်။
၁၉၄၉ ခုနှစ်တွင် တရုတ်ပြည်၌ ချန်ကေရှိတ် အစိုးရ အရေးနိမ့်သွားသောအခါ ယူနန်နယ်မှ ဂျင်နရယ်လီမီခေါင်းဆောင်သော တရုတ်ဖြူ အမှတ် (၉၃)တပ်မကြီးသည် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသို့ တိမ်းရှောင် ဝင်ရောက်လာခြင်းဖြင့် ကေအမ်တီကျူးကျော်မှုစခဲ့ သည်။ တရုတ်ဖြူတပ်ပျက်များသည် နီးစပ်ရာနယ်ရှင် စော်ဘွားများအား စီးပွားရေးအရလည်းကောင်း၊ လက်ဆောင်ပဏ္ဏာဆက်၍လည်းကောင်း စည်းရုံးကာ ခိုအောင်းနေခွင့်ရခဲ့ကြသည်။ တရုတ်ဖြူကျူးကျော်မှုက တစ်စထက်တစ်စ အတင့်ရဲ၍လာလေရာ နယ်ရှင် စော်ဘွားအချို့၏အကူအညီအားပေးမှုနှင့် မကင်းခဲ့ကြ ပေ။ တပ်မတော်သည် ၁၉၅၂ ခုနှစ်မှစ၍ စစ်ဆင်ရေး ကြီးများဆင်နွှဲကာ ကေအမ်တီများအား တိုက်ခိုက် မောင်းထုတ်ခဲ့သည်။ စစ်ဆင်ရေးဒေသအတွင်း စစ်အုပ်ချုပ်ရေးကဲ့သို့ အုပ်ချုပ်ခဲ့သည်ကို နယ်ရှင် စော်ဘွား အချို့မကျေနပ်ခဲ့ကြပေ။
ထိုအချိန်တွင် တိုးတက်လာသော ရှမ်း တိုင်းရင်းသားလူငယ်များက စော်ဘွားများပဒေသရာဇ် ၏ အာဏာစွန့်လွှတ်ရန် နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုများ ပြုလုပ်လာကြသည်။ ယင်းကို ပြည်သူလူထုကလည်း ထောက်ခံခဲ့ရာ စော်ဘွားများသည် ပဒေသရာဇ် အာဏာတည်မြဲရေးအတွက် နည်းလမ်းရှာကြံကာ ကြိုးပမ်းနေကြရသည်။ ၁၉၅၄ ခုနှစ်မှ ၁၉၅၇ ခုနှစ် အတွင်း မိုင်းရယ်တွင် ပဒေသရာဇ်အစည်းအဝေးပွဲ နှစ်ကြိမ်ကျင်းပခဲ့ရာ ရှမ်းစော်ဘွားများအာဏာ စွန့်လွှတ် ရန်အချိန်မကျသေးသဖြင့် အာဏာမစွန့်လွှတ်ရေး၊ ကိုယ့်ကြမ္မာကိုယ်ဖန်တီးရေး၊ သီးခြားရှမ်းပြည်နယ် တည်ဆောက်ရေးနှင့် ပြည်ထောင်စုမှ ခွဲထွက်ရေးတို့ကို ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။
၁၉၅၇ ခုနှစ်၊ ဖဆပလမကွဲမီမှာပင် ရှမ်းပြည် မြောက်ပိုင်း ပါလီမန်အမတ် နမ့်ခမ်းဦးထွန်းအေးက စော်ဘွားကြီးများ အာဏာစွန့်လွှတ်ရန်နှင့် ပင်လုံ စာချုပ်အရ ၁ဝ နှစ်ပြည့်သော်လည်း ရှမ်းပြည်နယ် ခွဲထွက်ခြင်းမပြုရန် လွှတ်တော်အစည်းအဝေး၌ အကြိမ်ကြိမ်တင်ပြခဲ့သည်။ ထိုအခါ စဝ်ခွန်ချိုဦးစီး သော ရှမ်းပြည်တောင်တန်းသားများ စည်းလုံးညီညွတ် ရေးအဖွဲ့(ရတစညဖ)က ပြည်မမှခွဲထွက်ရေးကို တောင်းဆိုခဲ့သည်။ ဦးထွန်းအေးဦးစီးသည့် ရှမ်းပြည် ပြည်သူ့လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ ရပလဖခေါ်(ရပလ)က ခွဲထွက်ရေးကို ကန့်ကွက်ခဲ့သည်။ သို့နှင့် ရှမ်းပြည် စော်ဘွားများအကြားတွင် ခွဲထွက်လိုသူများနှင့်ခွဲ မထွက်လိုသူများကွဲပြားလာပြီး အချင်းချင်း မပြေလည် မှုများဖြစ်ပေါ်လာသည်။ ယင်းအချိန်တွင် သီပေါ စော်ဘွားနှင့် မိုင်းရယ်စော်ဘွားတို့က ခွဲထွက်ရေးကို ထောက်ခံသော ရှမ်းပြည် ပြည်သူ့ညီညွတ်ရေးအဖွဲ့ (ရပညဖ)ကို ငွေအား၊ လူအားဖြင့်ပံ့ပိုးပြီး ဖွဲ့စည်း တည်ထောင်ကြပြန်သည်။
၁၉၅၇ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၇ ရက်တွင် လူတစ် သောင်းပါဝင်သော လှည့်လည်ဆန္ဒပြပွဲကျင်းပသည်။ ယင်းဆန္ဒပြပွဲတွင် စော်ဘွားများအာဏာ မစွန့်လွှတ် ရန်နှင့် လွတ်လပ်ရေးရရှိပြီး ၁ဝ နှစ်ပြည့်ပါက ပင်လုံ စာချုပ်အရ ခွဲထွက်ရန် ကြွေးကြော်သံများကို ကြွေးကြော် ခဲ့ကြသည်။ ယင်းဆန္ဒပြပွဲမှာ သီပေါစော်ဘွားနှင့် မိုင်းရယ် စော်ဘွား တို့၏ရပညဖလက်ချက်သာဖြစ်သည်။ ၁၉၅၇ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၂ဝရက်တွင် ရပညဖ ညီလာခံတစ်ရပ်ကျင်းပရာ ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းနှင့် မြောက်ပိုင်းမှ ရှမ်းစော်ဘွားများ၊ ရှမ်းအမျိုးသား ကိုယ်စားလှယ်များ ကိုဖိတ်ကြားခဲ့သည်။ ယင်းညီလာခံ က အောက်ပါဆုံးဖြတ်ချက်များကို ချမှတ်ခဲ့သည်။
(က) စော်ဘွားများ အာဏာစွန့်လွှတ်ရန် အချိန် မကျသေး။
(ခ) ပင်လုံစာချုပ်အရ ၁ဝ နှစ်ပြည့်မြောက်လျှင် ရှမ်းပြည်နယ်သည် ပြည်ထောင်စုမှ ခွဲထွက် နိုင်ခွင့်ရရှိရေး။
(ဂ) ပြည်ထောင်စုအစိုးရက နိုင်ငံခြားသား များကိုခေါ်၍ ရှမ်းပြည်နယ်ကို မြေဧက တစ်သန်းခန့်ကို ထွန်ယက်လုပ်ကိုင်စေမည့် စီမံကိန်းသည် ရှမ်းပြည်မျိုးရိုး အစဉ်အလာ ကို ထိခိုက်စေနိုင်သည်။
(ဃ) ဘော်တွင်းသတ္တုမိုင်းကို ပြည်ထောင်စုအစိုးရ က လက်ဝါးကြီးအုပ်အမြတ်ထုတ်နေသည်။
(င) ဂျပန်စစ်လျော်ကြေးကို ပြည်ထောင်စုအစိုးရ အမည်ဖြင့်ရယူသော်လည်း ရှမ်းပြည်နယ် အတွင်း ပညာရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးများ တွင် သုံးစွဲမှုမရှိ စသည်တို့ဖြစ်သည်။
မိုင်းရယ်မြို့တွင်ကျင်းပသော ရပညဖညီလာခံ သည် ရှမ်းလူထုကို လှုံ့ဆော်ပြီး ရှမ်း-ဗမာသွေးခွဲ ရေး၊ ဗမာမုန်းတီးရေးများကို ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ပဒေသရာဇ်ဆန့်ကျင်ရေးစိတ်ဓာတ်များကို လူမျိုးရေး စိတ်ဓာတ်ဖြင့် လှည့်စားပေးလိုက်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ရပညဖသည် ၁၉၅၇ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၅ ရက်တွင် ရပညဖ (က)ဟူ၍ ပြောင်းလဲပြီး မိုင်းရယ်မှ သီပေါသို့ ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ ထို့နောက် ရှမ်း-ဗမာ သွေးကွဲရေး စာရွက်စာတမ်းများကို သီပေါမြို့တွင်ကပ်ခဲ့သည်။ တပ်မတော်ဆန့်ကျင်ရေး၊ ဗထူးမြို့ သင်တန်းကျောင်း ဆန့်ကျင်ရေး၊ မျက်နှာညိုဆန့်ကျင်ရေြးေ<ွကးကြော်သံ များကိုလည်ြးေ<ွကးကြော်ခဲ့သည်။
၁၉၅၇ ခုနှစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ မြေအောက်သောင်းကျန်းသူများ အရှိန်လျော့ကျလာ သော်လည်း မြေပေါ်နိုင်ငံရေးပါတီများမှာမူ ညီညွတ် မှုမရှိသေးပေ။ အစိုးရအဖွဲ့ပင်လျှင် ပြိုကွဲလုဆဲဆဲ ဖြစ်လာလေရာ ရှမ်းပဒေသရာဇ်များသည် နိုင်ငံရေး အကျပ်အတည်းများကို အခွင့်ကောင်းယူကာ လှုပ်ရှား ခဲ့ကြသည်။ မဟာဒေဝီ စဝ်နန်းဟိန်းခမ်းသည် စော်ဘွား ထောက်ပံ့ကြေးဖြင့် တက္ကသိုလ်ရောက်နေသော လူငယ် လူရွယ်များကို မြှောက်ပင့်ပေးခဲ့သည်။ နယ်ဘက် ရဲဘက် ဆိုင်ရာ ဝန်ထမ်းများ နယ်ပိုင်၊ ရွာအုပ်၊ သူကြီးနှင့် ရွာခေါင်းများ၊ သူခိုး၊ ဓားပြများကိုလည်း လက်သိပ် ထိုးစည်းရုံးခဲ့သည်။ လက်နက်လူသူစုဆောင်းခြင်း၊ သင်တန်းပေးခြင်းများကိုလည်း ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ရှမ်းသောင်းကျန်းမှု ပထမအဆင့်တွင် ပါဝင်သူ များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်-
(ဆ) ညောင်ရွှေစော်ဘွား၏ မဟာဒေဝီ(စဝ်နန်း ဟိန်းခမ်း)။
(ဇ) သိန္နီစော်ဘွား၏ ကိုယ်စားလှယ် မဟာဝမ်း။
(ဈ) ရပညဖအမှုဆောင် ၁၅ ဦး။
သို့နှင့် ကျိုင်းတုံစော်ဘွား၏ဦးလေးတော်စပ်သူ စဝ်ခွန်ဆိတ်နှင့်စိုင်းနွဲ့တို့ဦးစီးကာ ( Youth of Keng Tung State) ခေါ် လူငယ်တပ်ဦးကို ကျေးရွာကာကွယ်ရေးအသွင်ဖြင့် စတင်ဖွဲ့စည်းလိုက် သည်။ ( Youth of Keng Tung State) မှာ ၁၉၃၇ ခုနှစ်ကတည်းက စဝ်ဘွန်စဝ်က တည်ထောင် ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ စဝ်ဘွန်စဝ်သည် စဝ်ခွန်ဆိတ်နှင့် ဖအေတူ မအေကွဲ ညီအစ်ကိုများဖြစ်သည်။ စဝ်ခွန်ဆိတ် ၏လှုပ်ရှားမှုများကို အစိုးရအာဏာပိုင်များက မသင်္ကာ သဖြင့် ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရနှင့် ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီး ဌာနတို့တိုင်ပင်ကာ ပုဒ်မ(၅) ဖြင့်ဖမ်းဆီးခဲ့သည်။ စဝ်ခွန်ဆိတ်အဖမ်းခံရသောအခါ စိုင်းနွဲ့သည် ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ကာ မိုင်းကျွတ်(အယ်တီ-ဝ၅၁၇) တွင် လူသူလက်နက်စုဆောင်း၍ စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှု စတင်တော့သည်။ ၁၉၅၈ ခုနှစ်တွင် ရှမ်းပြည်နယ် အစိုးရကတောင်းဆိုလိုက်သဖြင့် စဝ်ခွန်ဆိတ်ကို ဖမ်းဆီးထားရာမှ ပြန်လွှတ်လိုက်ရာ စဝ်ခွန်ဆိတ်သည် ထိုင်းနိုင်ငံ ဇင်းမယ်မြို့သို့ထွက်ပြေးပြီ၊ ရှမ်းသောင်းကျန်း သူများကို အကူအညီပေးလေတော့သည်။ ဖော်ပြပါ အချက်များကြောင့် ၁၉၅၇-၅၈ ခုနှစ်တွင် စတင် ပေါ်ပေါက်လာကာ ရှမ်းသောင်းကျန်းမှုများမှာ ပဒေသရာဇ်များ၏ လက်ချက်ဖြစ်ကြောင်းထင်ရှား လေသည်။ ပဒေသရာဇ်စော်ဘွားများသည် မြန်မာ နိုင်ငံ၏အထွေထွေနိုင်ငံရေးကျဆင်းချိန်ကို အခွင့် ကောင်းယူခဲ့ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
စိုင်းနွဲ့သည် နွံစဝ်ဟန် (NSH) ခါ် ရဲရင့်သော ရှမ်းလူငယ်များအဖွဲ့ကို ၁၉၅၈ ခုနှစ်၊ မေလ ၂၁ ရက် တွင် ထိုင်းနိုင်ငံမြန်မာနယ်စပ် ဟွေပုဟော (အယ်တီ-ဝ၅၅၆) တွင် စတင်ဖွဲ့စည်းလိုက်သည်။ ယင်းစခန်းတွင် အင်အား ၄ဝဝ ခန့်စုစည်းမိခဲ့ပြီး ဌာနချုပ်ကို ထိုင်းနိုင်ငံ ပန်တောင်း (အယ်တီ-၉၃၂ဝ)သို့ ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ ဗဟိုဌာနခွဲတစ်ခုကို ကျိုင်းတုံနယ်ထဲတွင်ထားခဲ့သည်။ နွံစဝ်ဟန်အဖွဲ့ကို သိန္နီစော်ဘွား၊ မဟာဒေဝီ၊ သီပေါ စော်ဘွား၊ မိုင်းရှူးစော်ဘွား၊ လဲချားစော်ဘွား၊ ကျေးသီး စော်ဘွား၊ မိုင်းရယ်စော်ဘွား၊ မိုင်းလင်းစော်ဘွားနှင့် ညောင်ရွှေ စော်ဘွားတို့က မြေပေါ်မှအားပေးကူညီခဲ့သည်။ ထို့နောက်ပိုင်းတွင်ကား လွတ်ကျောက်ဆောက် (SSIA) (SSIA = Shan State Independence Army.) စဝ်ဟန် စစ်ဆိုင်း (SNA) ( SNA = Shan National Army.)၊ ရှမ်းပြည် တော်လှန်ရေးတပ်ပေါင်းစု (SURA) ၊(SURA= Shan United Revolutionary Army.) ရှမ်းပြည် ဆိုင်ရာတော်လှန်ရေး ကောင်စီ (USNF) (USNF=United Shan National Front.) စသဖြင့် ရှမ်းသောင်းကျန်းသူတစ်ဖွဲ့ပြီးတစ်ဖွဲ့ ပေါ်ပေါက်လာတော့သည်။
Posted by Myanmar Political Research Organization at 3:38 PM